Tukaanni siree ga’eessi isaa bifa diimaa magaala kan qabu ta’e iinchii ¼ hanga 3/8 dheerata, baladhinni isaanii dheerina isaanii irratti kan hundaa’u ta’a. Hanaga firii poomii ga’u. Tukaanni reefu uumamtu xiqqaa fi ijaan illee arguuf rakkisaa dha.
Tukaanni siree laboobbaa hin qaban kanaafuu barrisuu hin danda’an. Tukaanni sireeasii olii fid alga sirriittii fiiguu danda’u.
Tukaanni siree yeroo dhihootti nyaata kan hin arganne yoo ta’e haphii fi dheeraa dha. Tukaanni siree erga dhiiga xuuxee booda ni bokoka, ni dheerata bifti isaas diimaa ta’a.
Hanqaaquu tukaana siree yoo argite boorsaa pilaastikii keessa gochuun gara ogeessa to’ataa ilbiisotaa fiduun baruun ni danda’ama.
Yoo ogeessichi gargar baasuu dadhabe hanqaaquu sana gara teessoo armaan gadiitti ergaa:
Yoo tukaana argite yoomii fi eessatti akka argite gabaasi. Kun immoo ogeessi to’annaa ilbiisotaa saphaatti akka sakata’uuf isa gargaara.
Tukaana Siree Argeeraa?.pdf